पाञ्चालीभित्र कवि कृष्ण कँडेल (कृति चर्चा) | चितवन पोष्ट
कृष्ण कँडेल एक रंगकर्मी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, असल नागरिक र कवि हुन् । कँडेल सर्वनामका नाटकहरुमा देखिए, रेडियो नेपालको घटना र विचारमा सुनिए, राज्यको रुपान्तरण टेलिभिजन कार्यक्रममा देखिए, मानवअधिकारको हननका बेला सडकमा उत्रिए, अमेरिका गएर बगाएको पसिना बेचेर नेपालमा घर बनाए । जीवनका तिनै आरोह र अवरोहहरुले उनका संवेदनामा झट्का दिइरहे र उनी कवि बने । उनी विगत र वर्तमानका तिनै भूमिकाहरुले दिएका स्पर्श बोकेर कविता लेख्दैछन् ।
त्यसो त, कविता उनले हिजोआजमात्रै लेख्ने गरेका होइनन्, उनको कविताको यात्रा धेरै लामो छ । कवितासँगको उनको नाता पुरानो हो । पुरानो, जस्तो कि २०२७–२८ सालतिरको । कवि कँडेल त्यतिबेला नै कविता लेखेर जिल्लास्तरीय कविता प्रतियोगितामा पुरस्कृत पनि भएका थिए । २०५३ सालमा उनको कवितासङ्ग्रह ‘बुद्घको आँखामा देश’ छापिएको थियो । हालै उनको कवितासङ्ग्रह ‘पाञ्चाली’ प्रकाशित छ ।
‘पाञ्चाली’ भित्र ४२ वटा कविताहरु छन् । ती २०५३ देखि २०७५ सालसम्म कवि कँडेलले लेखेका कविताहरु हुन् । कृतिभित्रका धेरै कविताहरुले कवि कँडेलले भोगेको जीवनलाई झल्काएको अनुभूत हुन्छ । कविले पत्रकारिता, मानवअधिकार र रंगकर्मजस्ता विषयलाई कवितामार्फत प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै, देश छोडेर विदेशमा बस्दाका पीडाहरु पनि कविताले बोलेका छन् । कविताले जीवन र समाजका केही शाश्वत मूल्यहरु बोकेका छन् । कवितामा उनका केही प्रश्नहरु पनि छन्, जस्तो कि –
धेरै भयो लेखेको
अब किन लेख्ने ?
के लेख्ने ? के नलेख्ने ?
मेरो कथाका सबै
पात्रहरु भ्रष्ट भएपछि
मेरो गीतका सबै
शब्दहरुमा भाइरस पसेपछि
म केका लागि लेखूँ ?
कसका लागि लेखूँ ?
आफ्ना कविताहरुका बारेमा कवि कृष्ण कँडेल लेख्छन्– ‘मलाई लाग्छ, जीवन कविता हो र कविता जीवन हो । त्यसैले, आफ्नो जीवन, समाज, देश, काल, परिस्थितिमा मान्छेले भोगेका कथाव्यथालाई कविताको माध्यमबाट उद्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।’
वर्तमान समय भौतिकवादी चिन्तनद्वारा प्रभावित छ । मानिसले सामानहरुलाई मह¤व दिएका छन् । मानिसहरु स्वार्थी बन्दै गएका छन् । मानिसहरुमा संवेदनाको तह धेरै नै घटिसकेको छ । आफन्तको मृत्युले पनि मानिसहरुलाई छुन छोडिसकेको छ । दोष समयको हो कि मृत्युको ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । कवि कँडेल लेख्छन्–
सत्य हजुर !
बानी बिग्रेछ मृत्युको
किन संवेदना छुँदैनन् ?
भोलि मेरो मृत्युमा तिम्रोे
र तिम्रो मृत्युमा
मेरो संवेदना पनि हराउने छ ।
देशमा भएको विसंगति र अवसरहरुको लुछाचुँडीले नागरिकलाई आर्थिक अभावले च्याप्दै गएको छ । त्यसैले, देशको माया हुँदाहुँदै पनि उनीहरु अवसरहरु खोज्दै विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । त्यही बाध्यता र विवशतालाई कवि कँडेलले ‘मुगलान सपना’ कवितामा उनेका छन्, उनी लेख्छन्–
गरेर टुकी बलेन
सपनाको झोली भर्न
म मुगलान पस्दै छु ।
कृतिमा मानवअधिकारकर्मी डा. गंगाधर अधिकारी, समालोचक प्राडा सावित्री कक्षपती, समालोचक डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतमका भूमिकाहरु छन् ।
अन्तमा, कवि कृष्ण कँडेलका बारेमा कवि दुबसु छेत्रीको कविता ‘बिम्बमा कृष्ण कँडेल’को एक अंश –
कृष्ण कँडेल एउटा
सभ्य मान्छे हो
सरल मान्छे हो
सुशिक्षित मान्छे हो
सुसंस्कृत मान्छे हो
हँसिलो मान्छे हो
रसिलो मान्छे हो
शिष्ट मान्छे हो
विशिष्ट मान्छे हो ।